Genoa 0-3 Milan: Ibrahimovic Iyo Messias Oo Rossoneri Ku Soo Celiyay Wadada Guusha, Roma Oo La Dubtay, Natiijooyinka Serie A
HomeWararka CiyaarahaGenoa 0-3 Milan: Ibrahimovic iyo Messias oo Rossoneri ku soo celiyay wadada guusha, Roma oo la dubtay, Natiijooyinka Serie A
December 2, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
Kooxda Ac Milan ayaa guul ka gaartay kooxda Genoa kulan ka tirsan Horyaalka Serie A Italy.
Zlatan Ibrahimovic iyo Junior Messias ayaa shabaqa soo taabtay iyadoo Milan ay ka soo kabsatay guuldarrooyin xiriir ah oo Serie A ah,kulan ay 3-0 ku garaaceen Genoa.
Halyeeyga kooxda Ibrahimovic ayaa daah-furay goolasha laga dhaliyay Genoa, isagoo laad xor ah hogaanka ugu dhiibay kooxdiisa daqiiqadii 10aad ee Ciyaarta.
Messias ayaa markaas dhaliyay labo gool, isagoo kubad madax dhaafiyay Goolhaye Salvatore Sirigu qeybtii hore ee ciyaarta ka hor inta uusan kubad joog hoose ah ka dhalin Goolhayaha qeybta labaad ee Ciyaarta Daqiiqadii 61aad.
Kooxda Genoa ayaa ku dhibtootay in ay u jawaabto kooxda martida ahayd ,iyadoo awooda Milan ay si fiican uga muuqatay natiijada ciyaarta guud ahaan kulanka ayaa ku soo dhamaaday 0-3.
Inter 2-0 Spezia:
Inter ayaa 2-0 ku garaacday Spezia kulan ka dhacay garoonka San Siro si ay u gaarto seddex guul oo isku xigta oo Serie A ah markii ugu horeysay tan iyo inta uu hogaaminayo Simone Inzaghi .
Kooxda martida loo ahaa ayaa qaab ciyaareed fiican ku jirtay labadii kulan ee hore ee ay ciyaartay horyaalka iyadoo garaacday hogaamiyayaasha horyaalka Napoli iyo kooxda yar ee Venezia.
Roberto Gagliardini ayaa hogaanka u dhiibay wiilasha Inzaghi qeybta hore daqiiqadii 36aad, Waxana gool rigoore ahaa ku daray Lautaro Martinez, qeybta danbe ee ciyaarta.
Dhanka kale kooxda Roma ayaa guul daro dhabarka loo saariyay Waxana dubatay Bologna.
Natiijo ahaan Napolo ayaa hogaanka ku heysa 36 dhibcood Ac Milan oo ku soo xigta ayaa leh 35 dhibcood halka 34 dhibcood ay leedahay kooxda Inter Milan, Roma oo fadhisa kaalinta 5aad ayaa leh 25 dhibcood.